Service ကိုမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - AlorAir
အဘယ်ကြောင့် alorair ကိုရှေးခယျြ
သန့်ရှင်းရေး & ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Dehumidifiers
Crawlspace & မြေအောက်ခန်း Dehumidifiers
air ကို Scrubbers
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး & သန့်ရှင်းရေး
Crawlspace & မြေအောက်ခန်း
ပံ့ပိုးမှု & န်ဆောင်မှုများ
လက်စွဲ & ရုပ်ပုံများ
အာမခံ / အာမခံမှတ်ပုံတင်ခြင်း
ကို Maintenance ကိုဗီဒီယို
မုန်တိုင်း Elite ကို Maintenance ဗီဒီယို
Sentinel HD55 ကို Maintenance ဗီဒီယို
Sentinel HD90 ကို Maintenance ဗီဒီယို
Sentinel HDi90 ကို Maintenance ဗီဒီယို
မုန်တိုင်း LGR Extreme ကို Maintenance ဗီဒီယို
မုန်တိုင်း por ကို Maintenance ဗီဒီယို
မုန်တိုင်းက Ultra ကို Maintenance ဗီဒီယို
Sentinel HD90 ဗီဒီယိုများသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Sentinel HDi90 ဗီဒီယိုများသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Sentinel HD55 ဗီဒီယိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
မုန်တိုင်း Pro ကိုဗီဒီယိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
မုန်တိုင်းက Ultra ဗီဒီယိုကိုသုံးပါရန်ကိုဘယ်လို
air ကို scrubber
ဘယ်လို dehumidifiers အလုပ်လုပ်သလဲ?
Dehumidifiers လေကြောင်းကနေအစိုဓာတ်ကို extract နှင့်ပထမဦးဆုံးအပူများကအခိုးအငွေ့မှလေအသွင်ပြောင်းနိုင်သည့်တစ်ဦးအေးမြနဲ့ heat exchanger သို့ထားပါ။ ထို့နောက်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပြွန်အပေါ်ငွေ့ငွေ့ရည်ဖွဲ့စေ။ နောက်ဆုံးမှာငွေ့ရည်ဖွဲ့ရေဖျန်ပြွန်ခြင်းဖြင့်ပယ်ရှားတော်မူသည်။
အကြှနျုပျ၏ dehumidifier ငါဘာလုပ်နိုငျသညျ, အလုပ်မလုပ်ဘဲနေရသနည်း
1) ။ အပူချိန်အကွာအဝေး Check နှင့် plug ကိုမှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ထားပြီးသေချာပါစေ။
2) .Visit www.alorairsolutions.com နှင့်သင့်မေးခွန်းများကိုမှတ်ပုံတင်ရန်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ system ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုဌာနကိုသင်ဆက်သွယ်ပါနှင့်ချက်ချင်းအဖြေပေးလိမ့်မယ်။
3) ။ သင်တို့သည်လည်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များများအတွက်လိပ်စာ sales@alorair.com အားဖြင့် AlorAir ဝန်ဆောင်မှုဦးစီးဌာနတစ်ခုက e-mail ပို့နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်သင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့အ 888-990-7469 မှာဒေသခံဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ် AlorAir ဝန်ဆောင်မှုဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
ပထမဦးစွာယင်းယူနစ်ပြားနှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကမြေပြင်ပေါ်တွင်လည်ပတ်နေသည်သေချာပါစေ။ ဒုတိယအကြောင့်ကုိုကြည့်မဖြစ်သေချာအောင်ဖို့ filter ကိုကွက်စစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါ filter ကိုကွက်ကုိုကြည့်ပါကထဲကယူနှင့်သန့်ရှင်းပါ။
ငါသည်ငါ့ control panel ကိုအပေါ် readout ကုဒ်အချို့ကြင်နာလာပြီပေါ့။ ဘယ်မှာငါအမှား codes တွေကိုစာရင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်သလဲ
မှားယွင်းနေသည် codes တွေကို (ကုန်ပစ္စည်းအရင်းအမြစ်များ, လက်စွဲအောက်မှာလည်းရရှိနိုင် www.alorairsolutions.com မှာ) ပိုင်ရှင်များ '' ကို manual အနေဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သည်အခြားသံသယအဘို့, ကျွန်တော်တို့ကို 888-990-7469 မှာဖုန်းခေါ်ပေးပါ။
အဆိုပါ AlorAir dehumidifier ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝကဘာလဲ?
အဆိုပါယူနစ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘဝများစွာသောအခြားကိစ္စများတွင် 8 နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
AlorAir ထုတ်ကုန်အဘယ်အရာကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန် (အဒေီ, ETL, CSA, etc) သယ်ဆောင်သလဲ?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်များအချို့သည် ETL, CE နဲ့စွမ်းအင်စတားလက်မှတ်သယ်။
အဘယ်မှာရှိကျွန်ုပ်၏ AlorAir ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်လက်စွဲစာအုပ်ရှာတွေ့နိုင်မလဲ
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာ print ထုတ်လို့ရတဲ့လက်စွဲစာအုပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျ Download ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးလျှင်, 888-990-7469 မှာ AlorAir ဝန်ဆောင်မှုဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်ပါ။ ငါတို့သည်နောက်တာဝန်ခံတစ်ဦးကိုအစားထိုးဖက်စ်သို့မဟုတ်သင်အီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းရာသီတွင် dehumidifiers သိုလှောင်မီ, အပေါငျးတို့သရေယူနစ်ကနေညှစ်နေသည်သေချာပါစေ။ ထို့အပြင်ယိုစီးမှုပြွန်ထဲမှာရေနှိမ်နင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့အထဲကညှစ်ထားပြီးကြောင်းသေချာပါစေ။ အဆိုပါယူနစ် weatherized ကြသည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကပြင်ပမှာနေရာချရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါ၏အ AlorAir ထုတ်ကုန်ငါအဘယ်မှာရှိဝန်ဆောင်မှုပေးရနိုင်မလဲ?
အများစုကတော့သင့်ရဲ့ယူနစ်တစ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း HVAC နည်းပညာရှင်တို့ကဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်; သင်သည်လည်းဝန်ဆောင်မှုပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်ယူနစ်ကယ်မနှုတ်နိုင်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့ဖို့ဘယ်လိုသိရန် 888-990-7469 ကိုမခေါ်ပါ။
website ကို www.alorairsolutions.com မှာ AlorAir ရဲ့ပြန်လာမူဝါဒဖတ်ရှုပါ။
ကျနော်တို့ FedEx Express ကို Saver အားဖြင့်ယူနစ်တင်ပို့အကြံပြုပါသည်။
နေရပ်လိပ်စာ: 16300 shoemaker Ave, Cerritos, CA90703
E-mail ကို: sales@alorair.com